Hisy ny fanambarana izay hotontosain-dry zareo avy eo anivon’ny firaisankinan’ireo kandida ho filoham-pirenena anio, raha ny loharanom-baovao iray omaly.
Mety efa azo an-tsaina ihany moa ny votoatin’izay raha tombanana fa hifantoka bebe kokoa amin’ny fanemorana ny fifidianana.
Anaty fampielezankevitra moa isika ankehitriny ary lojika raha samy mba miezaka ny mampiranty izay fandaharan’asa noraketiny am-boky avy ireo kandida. Lasa ataon’ireo mpikirakira an-tambajtran-tserasera amin’ilay fitenin’ny tanora hoe fanalana kosa ankehitriny ny vinan’asana kandida malaza ho favori iray izay toa miharihary fa tsy miteha-tany.
Fa miverina indray ankehitriny ny adihevitra mikasika ny hoe ity fifidianana ity no ratsy karakara indrindra ary efa mipetrapetraka ny halabato handaniana kandida mpanaparitaka volabe indrindra ao anatin’izao fampielezankevitra izao. Isan’ny feo mandeha ny hoe efa misy vata mangarahara miisa 50.000 any hanoloana ireo tena izy ary efa manaparitaka vola ihany koa hividianana ireo tompon’andraiki-pifidianana ilay kandida.